NYI LYNN SECK 18+ DEN: ကာလမသုတ်တှော
သင်ကိုယ်တိုင် ကြားနာရသည် ဆိုရုံမျှနှင့် မယုံကြည် လိုက်ပါနှင့်။
ရိုးရာအစဉ်အလာ ရှိသည်၊ အစဉ်အဆက် လက်ခံခဲ့သည် ဆိုရုံမျှနှင့် မယုံကြည် လိုက်ပါနှင့်။
အများသူငါ လက်ခံသည်၊ ယုံကြည်သည်၊ ပြောကြားသည် ဆိုရုံမျှနှင့် မယုံကြည် လိုက်ပါနှင့်။
စာပေကျမ်းဂန်များတွင် ဖှောပြထားသည် ဆိုရုံမျှနှင့် မယုံကြည် လိုက်ပါနှင့်။
မိမိရဲ့ ဆရာများ၊ အကြီးအကဲများက ညွှန်ကြားဆုံးမသည် ဆိုရုံမျှနှင့် မယုံကြည် လိုက်ပါနှင့်။
သင်တွေ့ရှိသော အရာတစ်ခုခုကို သေချာ စေ့စပ်စွာ လေ့လာကျင့်ကြံ သုံးသပ်ပြီး အကျိုးရှိသည်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တွေ့ရှိသော အခါမှသာ ယုံကြည်လက်ခံ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။
Buddha (Anguttara Nikaya Vol. 1, 188-193 P.T.S. Ed.)
ဗုဒဿဓဟောကြားတှောမူတဲ့ တရားတွေထဲက ကျွန်တှော အနှစ်သက်ဆုံး ကာလာမသုတ်တှော ဖြစ်ပါတယ်။ အဂဿငလိပ်စာကို မြန်မာလို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ထားတာ မဟုတ်ပါ။ နားလည်သလို ဘာသာပြန်ထားခြင်း ဖြစ်လို့ အများမူနဲ့ မတူတာရှိရင် ခွင့်လွှတ်စေလိုပါတယ်။
Posted by NLS at 4/29/2006 01:07:00 AM
No response to “ကာလမသုတ်တှော”